Is-casilaadda Raysal-wasaare Hailemariam Desalegn Yaa La Filayaa In Uu Hogaanka Dalka Qabto | Haldoor News
Is-casilaadda Raysal-wasaare Hailemariam Desalegn Yaa La Filayaa In Uu Hogaanka Dalka Qabto
Raysal wasaarihii dalka Ethiopia, Hailemariam Desalegn ayaa gudbiyay warqadiisii is casilaadda. Mudooyinkan dambe waxa Ethiopia ka taagan kacdoono shacab hormuudna ay u tahay qoomiyadda Oromadu. Kacdoonku wuxuu ka dhashay bartilmaameedka dawladdu ay ku beegsatay hogaamiyayaasha siyaasadda qoomiyaddaas, dhulka ay deggaan iyo tabashooyinka ku aaddan awood-qaybsiga dawladnimo.
Is casilaadda raysal-wasaaraha ka dib, waxa ay u badan tahay in xilka uu la wareego ninka isaga ku xiga oo ka soo jeeda qoomiyadda Amhara, magaciisana la yidhaahdo Demeke Mekonnen isla markaana ah nin Muslim ah. Kaliya arrintani waxa ay leedahay labba fasir. Midka koobaad waa in uu kala-saraynta maamul ee jirta uu yahay qofka caadiyan ku soo xiga ee xisbigu soo qadimi karo. Mid kale na waxa weeye in ugu yaraan ay hoos u dhigi karto kacdoonka shacab ee ay inta badan ku midaysan yihiin qoomiyadaha Oromada iyo Amharada, kagana soo horjeedaan Tigrayga.
Dhanka kale, waxa iyaduna jirta warar hoose oo sheegaya in raysal-wasaaraha xilka ka tagaya uu badali doono Lemma Megersa, Madaxweynaha Kilalka Oromada oo ah nin shacbiyad weyn ku dhex leh qoomiyada Oromada kuwooda muxaafidka ah iyo kuwa mucaaridka ah, iyo waliba qoomiyadda Amharada oo uu kilalkooda dhawaan bookhasho ku tagay aad na looga soo dhaweeyay.
Ethiopia runtii waxa aad moodaa in digadii dambaska huwanayd ay isu rogayso holac, waliba cidii dammin lahayd ee kartida iyo maskaxda furan u lahayd ay meesha ka maqan tahay. Bulshooyin ayaa mudo dheer la nool dulmi iyo tacadi, garawshiiyana aan helin jeeroo ay baraaruggeen! Dhib ba ma laha haddii baraarugooda laga garaabo, qarrankana cadaalad lagu soo dabaalo e, wali khiyaamo-dacawo ayay TPLF soo qadimasaa.
Shakhsiyan waxa aan qabaa in aanay dhibta jirta xal u ahayn in EPRDF ay keento xafiiska masuulka kale oo iska maqaar-saar ah, una adeega Tigrayga ku mabbay dhiiga dadka, wallow is-casilaada raysal-wasaaruhu ay xisbiga laftiisa ku keeni karto kala-jab iyo in xisbigu gudihiisa is aamini waaya ba! Xalku wuxuu yahay, waa in baarlamanka la kala diro, doorasho degdega ah na la qabto si dadku ay ugu yaraan dib ugu aaminaan nidaamkooda dawladnimo! Ogoobeey, marnaba wax fudud ma aha in dawladnimada Ethiopia ay dib isu safayso, boogaheedana dhaydo. Sababtu waxa weeye, is-gumaysiga iyo cadaalad xumadda in laga garaabo, xaqana la isu dhiibo ayaa aad u adag!
M.A Candidate In Governance and Public Policy at University of Passau, Germany.